Kenya Mashiripiti eMagamba Matsva Ekushanya kuWTM London neWorld Tourism Network
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Awards » Kenya Mashiripiti eMagamba Matsva Ekushanya kuWTM London neWorld Tourism Network
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Awards • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau • Wtn
Chii chinotora kuti uve Tourism Hero? World Tourism Network yakavheneka nhasi pane izvi uye yakaziva vamwe veavo vakaenda imwe nhanho kuchengetedza kushanya kuchipfuura nedenda reCOVID-19.
Nhasi, Mbudzi 1, kwaive kuvhurwa kweWorld Travel Market muLondon kuExcel Exhibition Center.
Yakanga iri zvakare nguva yekutanga nhengo dzeWorld Tourism Network kusangana pachavo mushure memazana emisangano ye zoom panguva yeCOVID-19.
Iri ndiro zvakare zuva iro mamwe eTourism Heroes akapihwa neWorld Tourism Network akasangana muLondon kuWTN kuti atore zvitupa zvavo.
"Kune mazana ezviuru zveTourism Heroes," akadaro Sachigaro weWorld Tourism Network, Juergen Steinmetz, nhasi, "mukukudza magamba ese akachengeta indasitiri yedu yekufambisa neyekushanya ichipfuura neCCID-19. Tinovadaidza kuti magamba asingazivikanwe. Vari kwese kwese. Vamwe vavo tinozviona, tinoziva nezvavo, uye tinogona kuziva. Izvi ndizvo zvatiri kuita nhasi.”
Iyo World Tourism Network (WTN) yakavambwa muna Zvita 2020, mushure memwedzi ye9 ye kuvaka.travel hurukuro dzakarongwa naJuergen Steinmetz, muparidzi we eTurboNews.
Nhaurirano yekuvaka patsva yakatanga padivi peITB Berlin yakamiswa muna Kurume 2020 pamwe nePATA, Nepal Tourism Board, eTurboNews, uye African Tourism Board.
Nhasi, WTN ine nhengo munharaunda yeruzhinji kana yakazvimirira yekushanya munyika zana nemakumi maviri nesere.
Gore rapfuura, WTN yakagadzira iyo International Horo yeHurumende Magamba. Uku kwaive kuziva avo vakaenda danho rekuwedzera kutungamira indasitiri iyi kuburikidza nedambudziko reCOVID-19.
Mufananidzo neRubatsiro rweChristian del Rosario weCDR Galleries
Magamba mana ekutanga akapihwa aive Hon. Najib Balala, Secretary of Tourism weKenya; Hon. Edmund Bartlett, Minister of Tourism Jamaica; Dr. Taleb Rifai, aimbova Secretary General weUNWTO; uye Tom Jenkins, CEO weETOA.
Nhasi, magamba akasangana kekutanga uye akatambirwa neMagical Kenya paWorld Travel Market muLondon.
Rakanga riri zuva rakakosha kuti shamwari dzemunhu uye itsva dze zoom vasangane mumunhu. Vazhinji vaipinda WTM uye nhengo dzeWTN dzakasvika, dzichibatana maoko kekutanga. Yakanga iri nguva yepfungwa kune vamwe.
Zvitupa zvakaunzwa kune Tourism Heroes vari kupinda nhasi kana kumiririrwa, kusanganisira Michel Nahon anobva kuFrance, Aleksandra Gardasevic anobva kuMontenegro, Muzvinafundo Geoffrey Lipman yeSunX muBelgium, uye Agnes Muchuha wekuKenya.
Magamba maviri matsva anodada akazivikanwa nhasi kuWTM.
Rakanga riri zuva rekutanga semutungamiriri mutsva weBarbados Tourism ye Jens Thraenhart. Aive agariswa na Hon. Gurukota rezvekushanya kweBarbados, Hon. Lisa Cummins, uye mukuru weBarbados Tourism. Rakanga ririwo zuva raakamiririrwa neGamba Mubairo wezvaakaita zvinoshamisa, kusanganisira nguva yake saSachigaro weMekong Tourism Organisation yaakasiya mwedzi wapfuura.
Gamba idzva rechipiri rapihwa nhasi raive Dov Kalmann, Israel. Akanga ari nhengo yekutanga yebuilding.travel hurukuro uye akabatsira pamusangano wekutanga wesangano muBerlin, Germany, muna March 2020. Dov anomiririra Tourism Authority yeThailand muIsrael.
Mutungamiriri, Hon. Najib Balala, akatenda World Tourism Network naJuergen Steinmetz nebasa rakaitwa nesangano iri naJuergen mukudzoreredza kushanya.
Izvi zvakatsinhirwa naHon. Edmund Bartlett anobva kuJamaica, anove zvakare munhu ari kumashure kwenhaurirano dzekusimbaradza kushanya muCaribbean.
Tourism Heroes inogona kusarudzwa pasina muripo www.mapfumo.travel
Mamwe ruzivo nezve World Tourism Network: www.wtn.travel